Nahoana ny olona no misafidy ny Semalt
Ny tompon'ny tranokala sasany dia mihevitra fa noho ny fanampian'ny soratra tsy manam-paharoa, ny tranonkalany dia hahatratra ny toerana ambony ao amin'ny motera fikarohana. Mihevitra izy ireo fa hampiakatra ny fomba fijerin'ny tranokala, ary noho izany dia akaiky ny fiatoana lehibe. Famitahana mivaingana. Raha toa ka toy izao ny raharaha, tsy ilaina ny manam-pahaizana manokana momba ny SEO efa za-draharaha sy ny foibem-pandrosoana optimization SEO mahery. Sarotra kokoa, ary tsy misy matihanina, ny orinasanao an-tserasera ihany no mitondra fahombiazana anao. Na eo aza ny zava-drehetra, Semalt dia manohy ny optimization SEO tranokala mandritra ny folo taona mahery.
Ny traikefa lehibe dia mamela azy io hiatrika ny asa miatrika fahasarotana. Semalt dia namonjy tranonkala an-jatony, nanintona azy ireo ara-bakiteny tao amin'ny hantsana. Ny hevitra momba ny mpanjifa maro no manamarina izany. Ankoatr'izay, azonao atao ny mandinika ireo tranga ao amin'ny tranokalanay, izay mampiseho ohatra marina mahomby amin'ny fomba fiasa. Raha nanapa-kevitra ny hanorina orinasam-pifandraisana lehibe ianao, dia ny Semalt irery ihany no fomba lalanao. Ny hany azontsika atao ihany no manampy ny olona hanao fampidiram-bola tsara. Ny fahombiazanao dia midika hoe fahombiazana, ka fantatray ny fomba hahomby.
Tsy tsiambaratelo fa nanjary mpitarika ho an'ny optimization SEO tranonkala i Semalt. Manana ekipa matanjaka manana matihanina tena matihanina izay afaka miatrika andraikitra rehetra. Voalohany indrindra dia vondrona vondrona manam-pahaizana momba ny SEO erak'izao tontolo izao. Tokony homem-pankasitrahana amin'ireo mpitantana mahay, IT-manam-pahaizana manokana, tsena isika. Ny solika an'ny rafitra Semalt mahery vaika indrindra dia atolotry ny mpanoratra, talenta, ary mpanadihady talenta. Zava-dehibe ny manamarika fa ny tsirairay amin'ireo matihanina ireo dia manana fahalalana SEO lehibe.
Amin'ny teny hafa, Semalt azo aseho ho toy ny mekanika voarindra tsara amin'ny fitrandrahana tranonkala amin'ny alàlan'ny teknolojia SEO manapaka. Izao dia miharihary ny antony tsy ahazoana mpifaninana mendrika amin'ity sehatra ity i Semalt. Raha ny tena izy, ny toerana nitarika an'i Semalt dia nohamafisina nandritra ny taona maro. Androany, saika ny rehetra mahalala fa ny Semalt ihany no miantoka ny tena fahombiazana amin'ny SEO optimization.
Ny fantatsika momba ny SEO
Ny SEO na Search Engine Optimization dia matetika ampiasaina amin'ny lexicon eo amin'ireo mpampiasa internet. Raha ny fandehany fa tsy ny rehetra no mahalala ny tena dikan'io teny io. Tsy vitsy koa ny mahatakatra ny heviny. Hanokatra ny varavarana lamba izahay ary hanazava hoe inona izany. Araka ny fantatrao, ny milina fikarohana dia manome ny mpampiasa ny lisitry ny tranokala ho valin'ny fangatahan'izy ireo. Ny tranokala sasany dia mivoaka etsy ambony amin'ny milina fikarohana, ny sasany kosa dia tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny pejy vitsivitsy. Ny fikatsahana ny fikarohana momba ny tranokala dia natao hanomezana toerana ny tranokalanao any amin'ny toerana ambony ao amin'ny milina fikarohana. Noho izany, azo antoka ny milaza fa ny SEO dia andiana fepetra hanatsarana ny toeran'ny tranokala amin'ny valin'ny fikarohana, araka ny fangatahana napetraka mialoha.
Raha taloha, dia nampiasaina tamin'ny Internet ny ankamaroan'ny Internet mba hitadiavam-baovao, ankehitriny dia tsy mitovy ny zava-misy ankehitriny. Ny fitomboan'ny isan'ny mpampiasa internet, ny teknolojia vaovao ary ny maro hafa dia nanova ny Internet ho fitaovana marketing lehibe sy toerana fivarotana. Ny fampiroboroboana an-tserasera dia mety ilaina ho an'ny orinasa izay mitady ny vokatra mety na serivisy amin'ny Internet. Na izany aza, olona an'arivony no mikaroka ny vokatrao isan'andro fa mahita ny vokatra an'ny mpifaninana aminao. Izany dia satria ny mpifaninana haingana kokoa dia efa naka toerana tsara indrindra tamin'ny valin'ny fikarohana. Mety hanintona ny mpifaninana aminao koa ianao. Ny hany ilainao dia ny fanombohan'ny fikarohana optimization miaraka amin'i Semalt.
Mazava ho azy, fomba fahombiazan'ny fikarohana fikarohana dia fomba mahomby hanintonana ny mpanjifa, saingy misy toe-javatra iray: ny matihanina ihany no mety hahatanteraka izany. Ary ny teboka eto dia tsy ny hoe mety hanasazy ny tranokala ao amin'ny tranokalanao ny fanandramana tsy mino. Indraindray dia maro ny isan'ny mpitsidika-toerana, fa ny haben'ny mpividy kosa mbola miambina foana. Mba hahazoana vokatra tsara indrindra amin'ny fampiroboroboana, dia mila mamaritra ny lisitry ny fangatahana hampiroboroboana sy ny paikadin'ny fampiroboroboana ianao. Ny manam-pahaizana momba ny Semalt dia afaka mandray fanapahan-kevitra stratejika amin'ny toe-javatra samihafa, ka aza manandrana mandrafitra izany irery; fa aza matoky ny orinasam-pitokisana.
Vahaolana SEO SEO
Ny optimization SEO dia misy drafitra marketing amin'ny dizitaly izay misy teknika sasany nokasaina hampiroboroboana tranonkala na marika. Ny teknika toy izany dia mamela anao hiseho bebe kokoa amin'ny Internet. Semalt hatrany dia manolotra vahaolana mahomby feno fanandramana izay manarona ireo hetsika ilaina rehetra. Ny valin'ny farany dia fitomboan'ny fifamoivoizana sy ny fahitan'ny tranonkala. Ny tena azo ampiharina dia ny fanentanana FullSEO sy AutoSEO, izay manome antoka ny fahombiazana amin'ny fotoana fohy. Tamin'ny voalohany, tokony hoheverinao ny dingana maromaro omena amin'ireo fampielezan-kevitra ireo hisafidy mety kokoa.
Semalt dia nanendry fepetra maromaro amin'ity fampielezana ity, ny tanjona dia ny hametraka ny tranokalanao eo amin'ny toerana ambony indrindra ao amin'ny milina fikarohana. Izao dia mila manana fahatakarana tsara ny fitsipika fototry ny AutoSEO. Ny dingana rehetra amin'ny fampielezankevitra dia atao amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa mivantana amin'ny ekipa Semalt. Ny hetsika nokendrena dia tsy isalasalana fa hitarika ny valiny irina raha manaraka ny torolàlana rehetra ataon'ireo manam-pahaizana manokana mikendry ny hampiroborobo ny tranokalanao izahay. AutoSEO dia misy ireto asa manaraka ireto:
fifantenana ireo teny fanalahidy mety indrindra;
Hanombohana ny fampielezana ny AutoSEO dia tsy maintsy misoratra anarana ao amin'ny tranokalanay izahay. Ny hetsika rehetra dia hataon'ny mpandinika ny tranokala. Tena mety tokoa satria ny fandraisana anjaranareo dia ny mandray ny tatitra ankehitriny eo amin'ny tranokala ihany. Ny mpandinika dia hanadihady tsara ny firafitry ny tranokala araka ny fenon'ny SEO. Aorian'izany dia hapetrakao ny tatitra voalohany momba ny toetran'ny tranokala sy ny lisitry ny lesoka hita nandritra ny famakafakana. Ireo lesoka ireo dia mila raikitra ihany mba handrosoana. Ny injenieranay SEO dia hijery ny famakafakana ihany koa ary hisafidy ireo teny manan-danja mifandraika amin'izany. Ny vokatry ny fomba dia mitombo ny fifamoivoizana tranonkala.
Ny dingana manaraka amin'ny fanentanana AutoSEO dia ny fisafidianana rohy amin'ny Internet ary fametrahana azy ireo ho loharano an-tserasera samihafa. Ny votoatiny dia voadinika tsara amin'ny fisian'ny lanjan'ny semantis. Ho fanampin'izany, tsy maintsy mifanandrify amin'ireo rohy voatendry hampidirana azy io. Eo ambany fanaraha-mason'ny lehibenay ny fomba fiasa manontolo, ka tsy misy atahorana ny fandraharahana ny tranokala. Ny mpitantana ihany koa dia manara-maso ny toerana misy rohy ao amin'ny milina fikarohana ary mamaritra ny haben'ny loharanom-pahefana alohan'ny hametrahana ny rohy.
Ny fampiasana fidirana FTP (Prot Transfer Transferocol) sy ny fampahalalana avy amin'ny tatitra teo aloha, ny manam-pahaizana momba ny Semalt dia manao ny fanovana ilaina amin'ny tranokala. Aorian'ireo fanovana ireo dia manomboka mitombo ny fahombiazan'ny tranokala. Nandritra ny fampielezan-kevitra dia nanara-maso ny fanavaozana ny laharana farany i Semalt, nampiditra ireo teny fanalahidy takiana. Voamarina avokoa ireo teny fanalahidy rehetra momba ny fanarahana ny atiny. Araka ny hitanao dia kely loatra ny fandraisanao anjara amin'ny dinganao fa mijanona tsy miambina hatrany amin'ny zava-mitranga rehetra ao amin'ny tranokala ianao. Raha eo amin'ny vidin'ny serivisy, ny fonosana AutoSEO isam-bolana dia mitentina $ 99.
Fanentanana feno FullSEO
Ny FullSEO dia optimization SEO kalitao, ny vokatr'izany dia trosa ao anatin'ny fotoana fohy kokoa. Toy izany koa, misy fomba fiasa maromaro hatao hanatsarana ny mari-pahaizana amin'ny tranokala ao amin'ny milina fikarohana. Eto, ny optimization anatiny sy ivelany dia tanterahina eo ambany fitarihan'ny manam-pahaizana SEO. FullSEO dia fampivoarana SEO fampiroboroboana izay manome fahombiazana tsy manam-paharoa amin'ny orinasa an-tserasera. Ambonin'izany, ity fanentanana ity dia hanampy amin'ny fanilihana ireo mpifaninana rehetra mandritra ny fotoana maharitra.
Ny dingana FullSEO dia mandeha miandalana. Ho fanombohana ny dingana dia tokony hisoratra anarana ao amin'ny tranokalanay ianao. Nanomboka ny famakafakana ny firafitry ny tranokala ary nahazo tatitra tamin'ny antsipiriany ianao. Momba ny tatitra, ny manam-pahaizana SEO dia mamaritra ny fototry ny semantik. Ny fandalinana koa dia mampiseho ireo lesoka rehetra misakana ny fandrosoana bebe kokoa. Tokony hanitsy avy hatrany ny hadisoana, avy eo fotoana tokony hamaritana ireo teny fanalahidy. Ny teny fanalahidy dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fizarana ny fifamoivoizana. Amin'ny alàlan'ny fidirana FTP dia hanampy ny fanovana rehetra ilaina ny manam-pahaizana manokana. Ity no sehatra amin'ny fanamafisana anatiny ny tranokala.
Manaraka, hatao manaraka ny optimization. Ity dingana ity dia ahitana fampidirana rohy mankany amin'ireo loharano manokana. Ireo loharanom-pahalalana ireo dia tokony hampiseho tsara ny fototry ny votoatinao. Ho avadika tsy ho ela ny tranokala aorian'ny fametrahana ireo rohy ireo, ka ireo manam-pahaizana SEO dia manatona tsara ity dingana ity. Semalt dia miasa am-pahombiazana miaraka amin'ireo tranonkala voamarina marobe, izay no mahatonga ny manampahaizana mahafantatra tsara ny toerana hidirana ireo rohy hahitana fahombiazana mahomby. Ny dingana FullSEO dia mijanona eo ambany fanaraha-maso maharitra mandra-pahavitany. Mijanona tampoka amin'ny fiovana rehetra ao amin'ny tranokala ianao. Makà tatitra momba ny fitomboan'ny mari-tranonkala. Amin'ny fotoana rehetra, afaka mifandray amin'ny tompon'andraikitra amin'ny Semalt ianao ary mitaky ny fanazavana ilaina.
Tsy misy mahasahy raha naato ny fampiroboroboana SEO noho ny antony sasany. Na dia hanaisotra ny backlink rehetra ao amin'ny iray volana aza i Google dia mijanona eo amin'ny toerana iray ny laharana. Tsy ho mampidi-doza tokoa ny laharam-pifanarahana, satria ny FullSEO no nanao ny asany. Ny toeran'ny laharana dia ho ambony kokoa noho ny alohan'ny hanaovana ny fampielezana. Sarotra ny hamaritana ny vidin'ny serivisy mialoha: Ny tetikasa tsirairay dia tranga iray. Matetika ny vidiny dia tendrena aorian'ny fandinihan'ny manam-pahaizana SEO ny tranokalanao ary manapa-kevitra. Na izany na tsy izany, ho lany tanteraka ny vola rehetra amin'ny fidiram-bola mety horaisin'ny fampielezana.
Ny fanangonana angona angona dia iray amin'ireo singa manatsara ny tranokala SEO mahomby. Nihoatra ny rafitra fifaninanana rehetra i Semalt. Ohatra iray amin'izany ny serivisy fanaraha-maso tranonkala antsipirihany - Analytics. Arakaraka ny fananganana tatitra amin'ny antsipiriany ny fanaraha-maso, ao anatin'izany ny famakafakana tranonkala fifaninanana. Ny teny fanalahidy tena mety no nofidina, ary misy rojo marika iray noforonina, arakaraka ny tombany. Miorina amin'ny fototry ny teny fanalahidy, ny fototry ny semantik dia ho azo jerena, izay hampiasaina hampiroboroboana ny tranokalanao amin'ny ho avy. Ity ny lisitry ny tanjona ho an'ny Analytics:
Manomboka amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana ny tranokalanay. Ny fanangonana angon-drakitra dia atao mandeha ho azy. Amin'ny alàlan'ny fahavitan'ny fanangonana famakafakana, dia handefa tatitra momba ny toeran'ny tranonkalanao ao amin'ny motera fikarohana ianao. Ankoatr'izay, ny tranokalan'ny mpifaninana dia zahana ihany koa, noho izany dia hanana fampahalalana marina momba ny zava-misy iainan'ny tranonkala fahatelo rehetra ianao. Tombontsoa lehibe izy io. Amin'ny ambaratongan'ny firafitry ny tranokala dia hojerena avokoa ny fenitra SEO rehetra, noho izany, ny fanamboarana tranokala dia hamboarina amin'ny fanatsarana bebe kokoa.
Ny fanananao kaonty manan-kery dia ahafahanao manampy tranonkala maromaro ao amin'ny kabinetranao manokana. Ny tranokala nampidirina tsirairay dia hodinihina ihany. Haneho ny valim-pifidianana rehetra ny tatitra; hiharihary ireo teny fanalahidy ilainao ampiasaina. Ny rafitra dia ho azo antoka fa mifanaraka amin'ny dikan'ny atiny ny teny fanalahidy. Ny fampifangaroana ireo fepetra ireo dia tsy isalasalana fa hitarika haingana ny fitomboan'ny fidiran'ny tranokala. Amin'izay fomba izany dia afaka manampy na mamafa ny teny fanalahidy hafa noho ny tianao ianao.
Ny tombony amin'ny fisafidianana Analytics dia ny famakafakana ny tranokala 24 ora isan'andro. Voamarina tsara ny fivoarany na dia miala sasatra sy tsy manao ny asanao aza ianao. Ny fampahalalana momba ny mpifaninana aminao dia ahafahanao mandray andraikitra amin'ny fotoana mety, mijanona mandrakariva amin'ny toerana ambony. Tsy mila mieritreritra ny atao hoe tsara kokoa ianao, hampahafantatra ny tena tokony ataonao ny Analytics. Betsaka ny olona mampiasa Application Programming Interface (API), tena mety satria ny angon-drakitra natokana ho azy avy hatrany dia ahafahanao mihazona hatrany amin'ireo fanavaozana rehetra. Ny kaonty dia manome fonosana tarika telo; samy manana ny vidiny avy ny tsirairay. Izy ireo dia:
Manoro hevitra amin'ny serivisy ihany koa i Semalt. Natao hamolavola tranokala arak'asa ny programa, anisan'izany ny famolavolana ny momba azy. Izy io dia mivantana - famolavolana, fampifangaroana amin'ny rindranasan'ny antoko fahatelo ary Rafitra fitantanana ny votoaty. Ny tolotra fanampiny dia modules e-commerce manokana sy API.
Ny fananganana tetikasa Internet ara-barotra lehibe dia misy hatrany amin'ny tetikady ara-barotra sasany. Semalt dia nanantena ny fisian'izany toe-javatra izany, nanoro hevitra ny fananganana horonantsary manokana. Ilay horonantsary dia mitondra ny endrika fampiroboroboana, taratry ny tombony rehetra an'ny orinasa vaovao. Ny fandaharana "Famokarana horonantsary fampiroboroboana" dia azo ampiharina amin'ny fomba roa: amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny modely. Amin'ny andiany tsirairay, hafa ny vidiny. Raha ny voalazan'ireo manampahaizana manokana dia 50% ny fahombiazan'ny orinasa an-tserasera dia miankina amin'ny fisolo tena tsara ny orinasa. Ny lahatsary ataontsika dia mampitombo ny isan-jaton'ny fahombiazana.
Noho izany dia nanao famintinana fohy momba ny orinasa Semalt izahay, fa mino, ity dia tendron-dranomandry afa-tsy raha oharina amin'ny tombontsoa rehetra azon'ny orinasa entiny. Ny optimization tranonkala SEO dia mihoatra lavitra ny fisafidianana teny fotsiny. Siansa iray manontolo no azo ho an'ny matihanina ihany. Vakio ny tantaranay; dia ho tsapanao fa ireo izay nanandrana ny hetsika nefa tsy nisy Semalt dia nangataka fanampiana anay. Ary dia namonjy azy ireo izahay. Aza mandany andro; fa kosa, manomboka mitombo amin'ny Semalt, manankarena ary mahasambatra. Miandry anao izahay!